Chief Accountant | Myint Myat Kyaw Group of Company Limited. ﻿
31.7.2019, Full time , Trading
Company: Myint Myat Kyaw Group of Company Limited.
Flowing in the stream of urbanization, MMK aims to build the variety of low-cost housing projects for the average-income citizens of Myanmar through cooperation and collaboration with the financial institutions.
To beafront-runner company in the field of construction industry, MMK aims toamass production of construction materials by the establishment of production facilities using sophisticated technology so as to provide better quality products with affordable and reasonable price.To grow sales volume in double through qualified technical and commercial human resources of the Company.
To establish the one stop-service sales centre for construction materials inafew years in order to fullfill customer’s choice.
To ensure reasonable rate of ROI (Return on Investment) for our shareholders through competitive advantages.
Innovation focusAs Myanmar is moving withamomentum towardsadeveloping state in the region of South East Asia, MMK needs toagreater extend of buildings and dwellings in the economic andsocial sectors.
To meet the requirements of new housings and buildings, MMK Construction Company was founded in1996.
A few years passed by MMK Trading Company, MMK Industry Company and MMK Service Company were also formed asasister companies inaview to provide better support to the MMK Construction.MMK's business activities include
We have developed into the full-bloomed company with our dynamic work force of about 100 employees. The times much on MMK gained much more confident in the area she works for and managed to bring the company to current status. Therefore MMK have recognized and appreciated her professional staffs on their individual efforts and result-oriented performances. MMK always keeps in hermind that out energetic employees are great assets of MMK Company.
•	ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ စက်ရုံများသို့စစ်ဆေးရန် သွားလာနိုင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏စာရင်းများအား အချိန်နှင့် တပြေးညီရေးဆွဲတင်ပြနိုင်ရမည်။
•	CPA, ACCA, B.Com, B.Act ဖြစ်ရမည်။
•	Accounting Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်အထက်ရှိပြီး Manufacturing ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
We offer •	Male/Female 1 Post
Work location အမှတ် (၅၂၇/၅၂၉)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။
Job posted: 31/7/2019
Myint Myat Kyaw Group of Company Limited.
5 Days, Full time , Trading
•	Quality Check,Control,Project Plan,Site inspecton,Time Schedule, Safety and Quality Management ကိုကျွမ်း ကျင်ပိုင်နိုင် စွာတာဝန် ယူ လုပ်ဆောင်နိုင် ရမည်။ •	Client and Staffs များအားလမ်းညွှန်သင်ကြားပြသနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Flowing in the stream of urbanization, MMK aims to build the variety of low-cost housing projects for the average-income citizens of Myanmar through cooperation and collaboration with the financial institutions. To beafront-runner company in the field of construction industry, MMK aims toamass production of construction materials by the establishment of production facilities using sophisticated technology so as to provide better quality products with affordable and reasonable price.
To grow sales volume in double through qualified technical and commercial human resources of the Company. To establish the one stop-service sales centre for construction materials inafew years in order to fullfill customer’s choice. To ensure reasonable rate of ROI (Return on Investment) for our shareholders through competitive advantages. Quality focus Customer focus Employee focus Innovation focus
As Myanmar is moving withamomentum towardsadeveloping state in the region of South East Asia, MMK needs toagreater extend of buildings and dwellings in the economic andsocial sectors. To meet the requirements of new housings and buildings, MMK Construction Company was founded in1996. A few years passed by MMK Trading Company, MMK Industry Company and MMK Service Company were also formed asasister companies inaview to provide better support to the MMK Construction.
MMK's business activities include Construction Industry Trading Service We have developed into the full-bloomed company with our dynamic work force of about 100 employees. The times much on MMK gained much more confident in the area she works for and managed to bring the company to current status. Therefore MMK have recognized and appreciated her professional staffs on their individual efforts and result-oriented performances. MMK always keeps in hermind that out energetic employees are great assets of MMK Company.
•	Project Plan,Site inspection,Sub-Contract များနှင့် Staff များအား Management ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ •	ဌာနဆိုင်ရာရုံးများသို့ ဝင်ထွက် သွားလာနိုင် သူ ဖစ်ရမည်။
110 Days, Full time , Trading
•	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Job ads in Hotel & Restaurant Jobs and in Yangon Region
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ရေရှည်လက်တွဲလုပ်နိုင်ရမည်။
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ငွေစာရင်းအသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Bank များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	၀န်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရမည်။ •	စက်ရုံများဆိုဒ်များသို့သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
132 Days, Full time , Trading
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လက်ရှိတွင် ရတနာအိမ်ရာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်ထဲနှင့် စက်ရုံများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအား အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စား၍ သင်ယူလေ့လာလိုစိတ်၊ နာခံလိုစိတ်ရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရ ...
•	စကားပြောချိုသာပြီး Customer များနှင့် ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ/သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွ� ...
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ စက်ရုံများသို့စစ်ဆေးရန် သွားလာနိုင်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏စာရင်းများအား အချိန်နှင့် တပြေးညီရေးဆွဲတင်ပြနိုင်ရမည်။
•	HR Policy, Procedure များ Pay Roll System များကို ကျွမ်းကျင်စွာရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဝန်မ်းရေးရာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းများ၏အရည်အသွေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်များကို တိုးတက်အောင်ပံ ...
Chief Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon JobsInMandalay Accountancy Jobs Accountancy Jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(8710)
Work in Yangon Region(1760)
Work in Mandalay Region(681)
Work in Mandalay City(191)
Dagon Glory Co., Ltd.(516)
Assistant Staff (Code - 29871) M/F (5)
Y&F Science & Technology
Sales And Marketing Executive (Chinese Speaking)
Seezar Soesan Group of Companies
Assistant Staff (Code - 29871)
Yangon Region 95 Days
Yangon Region 110 Days
Yangon Region 118 Days
Yangon Region 127 Days
Magway Region Today
Credit Accountant ( 200000 ~ 300000 MMK )
Chief Accountant-Best Western Chinatown Hotel (Yangon)